ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်ရည် 1800mAh အချိန်နှင့်မှတ်ဉာဏ်အစားထိုးကြိုးမဲ့တက်တူးကလောင်များအတွက် Tattoo ဘက်ထရီ
Tattoo Pen ဘက်ထရီ Android USB interface ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် - ၁၈၀၀ mAh အားသွင်းချိန် - ၁.၅ - ၂ နာရီ - အလုပ်လုပ်ချိန် - ၇-၈ နာရီအချိန်အပိုင်းအခြားမှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းအင်ပါ ၀ င်မှု - ၁။ ထည့်သွင်းမှု - ဤစက်ကို USB အားသွင်းသည့် port မှအားသွင်း။ lithium ဖြင့်အားသွင်းသည်။ ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းထားသည်။ Built-in ဘက်ထရီသည် ၃ ပိုင်း၊ ၆၀၀ mA / piece၊ 3.7V ဘက်ထရီဖြစ်သည်။ 2. Output: output current ကို 2A တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး lithium battery သည် switch key ၏ activation မှတဆင့် power သိုလှောင်မှုကိုလွှတ်ပေးပြီး power ကို t ...
32mm MO သံမဏိကျည်တောင့် Adattable Tattoo Grip Tattoo Needle Cartridges
ပစ္စည်းပစ္စည်း: သံမဏိပစ္စည်းအရေအတွက်အရေအတွက်: 1 pcs အဓိကအရောင်: ငွေအလေးချိန်: 245 ဂရမ်အချင်း: 32 မီလီမီတာညှိနှိုင်းမှု:4မီလီမီတာအင်္ဂါရပ်များ: 1. အလွန်အစွမ်းထက်သော finish ကိုများအတွက်လက်ပွတ်။ 2. မျက်နှာပြင်သေးငယ်တဲ့စတုရန်းပုံစံရှိပြီး, ကောင်းသောခံစားရသည်။ 3. ပြွန်အားလုံးစံကွိုင်သို့မဟုတ် rotary စက်တွေ fit ပါလိမ့်မယ်။ (၄) ပေါ့ပါးသောဆုပ်ကိုင်မှုကအလုံးစုံအလေးချိန်မရှိသောခံစားမှုကိုပေးသည်။ ၅။ ဆုပ်ကိုင်ခြင်းသည်သင်၏လက်များအတွင်း၌သက်သောင့်သက်သာအရှိဆုံးနှင့်သဘာဝခံစားချက်ကိုပေးသည်။ ၆ ။
Professional TP-7 Thunderlord Tattoo Power Supply Performance Parameters: Input Voltage: AC100-240V-50 / 60Hz， DC12 / 2A Output Voltage: 3-12V 3A Output Power: 36W အလုပ်လုပ်သောအချိန်: ၀-၃A အာမခံချက် - ၁ နှစ် Net Weight: 190g အရွယ်အစား: ၁၀၀ မှ ၆၀ * ၁၀၅ မီလီမီတာ * ဤထုတ်ကုန်သည်အိမ်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားသည်။ * ညွှန်ကြားချက်များ - (၁) ခလုတ်ကိုကြာရှည်နှိပ်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း၊ ခေတ္တရပ်ရန် / စတင်ရန်တို့ထိပါ၊ နှင့်အဖိုဗို့အားတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျော့ချခြင်းကိုလှည့်ပါ။ (၀ င်ရိုးတစ်ခုစီ၏ 0.1V) ။ (2) Output mode: ပုံမှန် mode ကို power-ont မှာ 1-0 mode ကို: le ...
Performance Parameter များ: Input Voltage: AC100-240V-50 / 60Hz Output Voltage: 1.5-12V / 2A Output Power: 24W အလုပ်လုပ်သောလက်ရှိ: 0-3A Voltage load protection: 99% Current load protection: 99% Ambient temperature: -10 ℃ - ၄၀ ℃ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ - ၅% မှ ၉၅% အာမခံချက် - ၁ နှစ်အသားတင်အလေးချိန် - ၁၉၀ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၁၀၀ * ၆၀ * ၁၀၅ မီလီမီတာညွှန်ကြားချက်များ - (၁) ပါဝါဖွင့် / ပိတ်ခြင်း: AC ပါဝါနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ၊ ခလုပ်ကိုဖွင့်ပါ၊ output ကိုစတင်ရန် / ရပ်တန့်ရန်ဘူးသီး (၂) Output voltage ညှိခြင်း။
အသားတင်အလေးချိန် ၇၀ ဂရမ်အလေးချိန်စုစုပေါင်း ၂၂၀ ဂရမ်ခန့်အရှည်အရှည် ၇၄.၅ မီလီမီတာ * အထူ ၃၃.၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးမှု - အဖုံးနှင့်အထက်အဖုံး + USB ပါဝါကြိုး + လက်စွဲအရောင် - အရောင် ၂ ရောင်၊ အနီရောင် Interface: RCA interface + DC interface (အပြင်ဘက်အချင်း ၅.၅ အတွင်းပိုင်း) အချင်း ၂.၁) ကုန်ပစ္စည်း၏သတ်မှတ်ချက်များ - ၁။ ပစ္စည်းအရည်အသွေး - အလူမီနီယမ်အလွိုင်း + acrylic၊ အလယ်အပိုင်းမှာအလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်၊ 2. အသွင်အပြင်: သုံးဖက်မြင်, စတုရန်း; ၂။ အားသွင်းချိန် - အစာရှောင်ခြင်း၊ ၁.၅ - ၂ နာရီလုံးလုံးအားသွင်းနိုင်သည်။ ၃။ အချိန်ကိုသုံးပါ။
အသားတင်အလေးချိန် - ၆၆ ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၂၂၀ ဂရမ်ခန့်အရွယ်အစား - အရှည် ၈၀.၃ မီလီမီတာ * အမြင့် ၆၁.၈ မီလီမီတာ * အထူ ၃၃.၇ မီလီမီတာထုပ်ပိုးမှု - အဖုံးနှင့်အထက်အဖုံး + USB ပါဝါကြိုး + လက်စွဲအရောင် - ၂ ရောင်စုံအနက်ရောင် - အနီရောင် Interface: RCA interface + DC interface ( အပြင်ဘက်အချင်း ၅.၅ အတွင်းအချင်း ၂.၁) ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက် - ၁။ ပစ္စည်းအရည်အသွေး - အလူမီနီယမ်အလွိုင်း + အရောရီနှင့်အလယ်အပိုင်းကိုအလူမီနီယမ်အလွိုင်း၊ ၂။ အားသွင်းချိန် - အစာရှောင်ခြင်း၊ ၁.၅ - ၂ နာရီလုံးလုံးအားသွင်းနိုင်သည်။ ၃။ အသုံးပြုသောအချိန် - ပုံမှန် 8V voltage အောက်တွင်၊ တည်ငြိမ်သော voltage သည် ...
ခိုင်ခံ့သောသံလိုက် 2A Tattoo power supply
အသားတင်အလေးချိန် - ၂၁၂ ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၃၅၀ ဂရမ်ခန့် (+ ပါဝါကြိုး) အရွယ်အစား - ၉၀ မီလီမီတာ * ၈၈ မီလီမီတာ * ၃၅.၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးမှု - အပေါ်နှင့်အနိမ့်အဖုံးအကွက် + ပါဝါကြိုးအရောင် - အရောင် ၅ ရောင်၊ အနက်ရောင် - ငွေရောင် - ငွေရောင်မီးခိုးရောင် - ပန်းရောင်အညွှန်း - ၁ ။ ပါဝါကြိုးစံရွေးစရာများ - အမျိုးသားအဆင့် + အပေါက်နှင့်ပါ ၀ င်သောနိုင်ငံအဆင့် - အမေရိကန်စံ + ဥရောပစံ ၂။ ပစ္စည်း - အလွိုင်း ၃။ input voltage - 100-230VCA, 50HZ-60HZ 4. Rated power - 23W 5. အများဆုံးထွက်ရှိနိုင်မှု - ၂ AMP-18V; အသုံးပြုရန်အတွက်ညွှန်ကြားချက်များ - ဒီကိရိယာဟာတက်တူးထိုးထားတဲ့ power supply ဖြစ်ပြီး input port အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။